Hammangaa Kuusaa deetaa Qindeessuu
Hammangaa maadheelee wardii keessaa akka kuusaa deetaatti fayyadamuuf qindeessuu dandeessa. Tokkoon tokkoo tarree kuusaa deetaa kana keessaa galmee kuusaa deetaatiin wal gita akkasumas tokkoon tokkoo tarree keessaa dirree kuusaa deetaatiin wal gita. Hammangaa keessatti akkuma kuusaa deetaa keessaatti fo'uu, gareessuu, barbaaduu, fi shallaggiiwwan hojjechuu dandeessa.
Hammangaa kuusaa deetaa kan wardii hammangaa sana qabte keessaa qofa gulaaluu fi argachuu dandeessa.Hammangaa kuusaa deetaa argii maddawwan LibreOffice Data keessaa argachuu hin dandeessu.
Hangii kuusdeetaa ibsuuf
Hammanga maadheelee kan akka hammanaga kuusaa deetaatti qindeessuu barbaaddu filadhu.
Deetaa - Hammanga Qindeessi filadhu.
Sanduuqa Maqaa keessatti, maqaa hammangaa kuusaa deetaatiif galchi.
Dirqaalaalee hammangaa kuusaa deetaatiif ifteessi.
Hammangaawwam Maadhee Gingilchuu
Title is: Hammangaa Kuusaa deetaa Qindeessuu